Ngwongwo na ngwongwo | Eindhoven & Amsterdam
Ngwongwo na ngwongwo
Anyị na-agbasi mbọ ike inye ndị ahịa Dutch na ndị mba ofesi ndụmọdụ na-etinye ego n'ọtụtụ ala na ụlọ dị na Netherlands, dịka ụlọ oriri, ntụrụndụ, ọrụ azụmahịa yana Pọtụfoliyo obibi.
Rịọgodi nkwado iwu
Iwu ala na ụlọ mejupụtara akụkụ niile dị n'iwu gbasara ihe anaghị emebi emebi. Anyị na Law & More nwere ike inyere gị aka na ndụmọdụ gbasara iwu mgbe ajụjụ ma ọ bụ esemokwu bilitere gbasara izu na ire nke ihe na-agaghị agha. Na mgbakwunye na nke ahụ, anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu gbasara ịgbazite ụlọ.
Ọzọkwa, ndị ahịa Dutch na mba ofesi nke Law & More a na-enyere aka ma dụọ ha ọdụ maka ịhazi ego ndị ụlọ ala Dutch na nke ndị mba ofesi n'ụzọ kachasị ụtụ isi site na iji usoro ikike. Omuma anyi sitere na nnweta nke ulo nkeonwe iji ghaa mkparita uka na ulo ahia di nkpa.
Law & More na-enyere ma ndị obibi ma ndị nwe ụlọ aka igbochi na idozi nsogbu nke iwu. Ya na ụlọ obibi ụlọ ya na ụgwọ ụlọ nke ụlọ ahịa na nke ọfịs. Ndị bi n'ụlọ na ndị nwe ala nwere ikike ọrụ iwu pụrụ iche. Ndị a nwere njikwa nhazi nke pụtara na ndị ọzọ nwere ike dochie anya nke ha nkwekọrịta nke aka ya. Na mgbakwunye, enwere usoro mmanye n'ime iwu mgbazinye. Mmadu enweghi ike idi iche na iwu ndi a, nke kachasi n’uche iche nche n’obodo a dika ndi ozo n’adighi ike, site na nkwekọrịta. Y’oburu na onodu n’otu ebe onye ibe gi adabaghi ​​na nkwekorita ya, enwere otutu ihe ichoro iji nwaa. N'ụdị ndị a ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi maka inye gị ndụmọdụ gbasara iwu ịchọrọ.
Ihe atụ nke isiokwu ndị anyị nwere ike inyere gị aka na:
• idekọ nkwekọrịta ụlọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ
• arụmụka gbasara nkọwa nkwekọrịta
• ime ihe ma ọ bụrụ na onye bi ma ọ bụ onye nwe ụlọ anaghị eme ihe kwekọrọ na nkwekọrịta ekwere
• nkwụsị nke mgbazinye ụlọ